ONG Pachamama : Nakaton’ny Governemanta Ekoatoriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2014 3:00 GMT
Nanome baiko ny hanakatonana sy ny “handravana” ny ONG Fundación Pachamama [es] natao hiaro ny ala amazoniana any Ekoatera sy hanohitra ny fitrandrahana solika tsy nisy fakàn-kevitra mialoha tany amin'ny faritra ny governemanta Ekoatoriana. Nolazain'ny governemanta fa “manakorontana ny filaminam-bahoaka” ilay fikambanana.
Ilay hetsika, izay baikon'ny Ministeran'ny tontolo iainana ary notanterahan'ny Ministeran'ny Atitany sy ny Mpitandro filaminana tamin'ny 4 Desambra 2013, dia nifototra amin'ny filazana fa ” niala tamin'ny antom-pisiana voalaza ao anatin'ny sàtany sy ny tanjony ilay Fikmabanana; sy amin'ny fitsabahana amin'ny politikam-panjakana ankapobeny, loza mananontanona ny fiarovana anatin'ny Fanjakana ary amin'ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka ” araka ny fitànana an-tsoratra navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Ministera. Ankoatra izay dia navoakan'ny Ministera tamin'ny Twitter ny Fifanarahan'ny samy Ministera laharana faha 125 izay manazava ny anton'ilay fanakatonana (jereo 1, 2, 3 ary 4) [es] :
Nampifandraisina tamin'ny hetsika nataon'ireo tompontany izay natao vao haingana tao anatin'ny XI Ronda Petrolera [es] (XI Oil Round), hetsika iray izay nanaovan'ny governemanta tolo-bidy faritra fitrandrahana solika 13 any Atsimo Atsinanan'ny ala Amazoniana any Ekoatera.
Yasunidos [es], vondrona iray miaro ny tontolo iainana, tamin'ity resaka nifantoka tamin'ny Yasuní National Park ity, no voalohany nisarika ny saina ho amin'ny zava-niseho :
FANAMBARANA http://t.co/E8Dq11BZ96 Hanao tafatafa ho an'ny mpanao gazety izahay ny Alakamisy 5/12 amin'ny 11 ora maraina ao amin'ny Alejandro de Valdez N24 33 sy Av. La Gasca